Wɔamma Ɔanntow Noho Emmfi Sky Tower No Do
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Arabic Armenian Armenian (West) Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Cambodian Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chuvash Croatian Czech Danish Dutch English (Borɔfo) Estonian Finnish French Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hungarian Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Korean Lithuanian Malagasy Malay Malayalam Mfantse Nahuatl (Central) Norwegian Ossetian Persian Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Rarotongan Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tarascan Tigrinya Totonac Tsonga Turkish Tzeltal Tzotzil Ukrainian Urdu Valencian Xhosa Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Jehovah Dasefo bi a wɔfrɛ no Graham Browne a oedzi mfe 80 boae maa wɔnye ɔbarimba bi a oenya adwenmuhaw kasae, amma ɔanntow noho emmfi Sky Tower a ɔwɔ Auckland, New Zealand, a ne tsentsen yɛ mita 328 (anamɔn 1,076) no do. Graham kãa dɛ: “Aber a ɔbarimba no kãa dɛ ɔpɛ dɛ ɔnye Jehovah Adasefo no mu kor kasa no, aporisifo frɛɛ me bisaa me dɛ mebɛpɛ dɛ moboa anaa.
“Sky Tower edwumayɛfo no dze abɔmu suoo mo mu gyinaa hɔ, na wɔdze ahoma tsentsen so suoo me Bible no mu maa me. Afei aporisifo no dze me kɔr bea a wogyina wɔ sor hɔ hwɛ adze no, ofi hɔ kɔ famu no yɛ mita 192 (anamɔn 630). Mframa bi a n’ano yɛ awɔw faa hɛn ho wɔ dan no sor hɔ. Nna ɔbarimba a ɔse ɔbɔtow noho ato famu no tsena m’enyim a kwan kakra da hɛn ntamu, na n’anan sensɛn wimu.
“Metsẽaa mu dɛ meyɛ Jehovah Adasefo no mu kor na mepɛ dɛ moboa no. Afei, aber a mobɔɔ mpaa tsiabaa bi wɔ m’adwen mu wiei no, mubuee me Bible no mu na mehyɛɛ ase dɛ menye no rekasa.
“Mekãa mbrɛ nkwa yɛ krɔnkrɔn no ho asɛm, asɛntsir bi a nna mekãa ho asɛm nnkyɛree wɔ hɛn Ahendzi Asa do.
“Mekãa dɛ ‘Nyankopɔn bu wo dɛ esom bo, na ɔama wo akyɛdze soronko bi​—nkwa. Ebɛnadze ntsi na ennkyerɛ no dɛ ibu dɛm akyɛdze yi dɛ ɔsom bo? Meserɛ wo, bra bambɔ bea yi.’
“Mekenkaan Kyerɛwnsɛm ahorow pii a John 3:​16 so kã ho, hɔ kã dɛ: ‘Na mbrɛ Nyankopɔn dɔɔ wiadze nye yi, dɛ ɔdze ne Ba a ɔwoo no kor no mae, ama obiara a ɔgye no dzi no ɔaannhera, na oeenya onnyiewiei nkwa.’
“Mekãa kyerɛɛ no dɛ, ‘ntsi Nyankopɔn dɔ wo na ɔpɛ dɛ etsena ase.’
“Ahyɛse no, nna ɔtse dɛ ma ɔbarimba no mmfa n’adwen mma me. Ntsi mobɔɔ mpaa tsiabaa wɔ me tsirmu dɛ Jehovah mboa me ma mensesã n’adwen. Ewiei koraa no, ɔsoɛɛr bɔkɔɔ, na ɔbɛɛn me kakra. Nna ɔahaw paa.
“Ɔkãa dɛ, ‘Jehovah Adasefo baa me fie ndaansa yi, na me paam hɔn. Iyi ma me tsibowa bu me fɔ paa. Meserɛ, hom dze bɛkyɛ me anaa?’
“Mekãa n’akoma too ne yamu dɛ: ‘O, hɛn mu pii yɛɛ dɛmara ansaana yɛrebɛyɛ Jehovah Adasefo. Ibotum enya awerɛhyɛmu dɛ Jehovah dze bɛkyɛ wo.’
“Oyii ano dɛ, ‘Meda wo ase, iyi ama adzesoa kɛse bi efi mo kɔn do.’
“Motoaa do dɛ, ‘Inyim a, musuro ma wo paa. Emi, wɔdze abɔmu esuo mo mu, naaso ɔwodze sɛ etserew a, ebɔhwer wo nkwa a ɔsom bo yi. Na iyi bɛma Jehovah no werɛ ahow paa. Ntsi meserɛ wo, bra bambɔ bea yi.’
“Afei muhun dɛ ɔaberɛ adze. Na ɔkãa no bɔkɔɔ dɛ ‘OK. Mereba hɔ.’
“Ɔbaa me nkyɛn wɔ beebi a wogyina hwɛ adze no, na aporisifo no yɛɛ ntsɛm kɛfaa no fii hɔ. Nna yɛakasa bɛyɛ dɔnhwer kor.”
Jehovah Adasefo fi hɔn akoma mu dwen nkorɔfo ho paa, tsitsir no hɔn a wɔahaw no. Wɔ wiadze ne beebiara no, wɔdze Kyerɛwnsɛm no ma nkorɔfo nya enyidado nye awerɛkyekyer nsɛm, na ama nkorɔfo no eenya awerɛhyɛmu dɛ Nyankopɔn dwen hɔn ho.
Fa mona Fa mona Wɔamma Ɔanntow Noho Emmfi Sky Tower No Do